पोग्बाको कप्तानीमा, प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको विजयी सुरुआत ! - Experience Best News from Nepal
पोग्बाको कप्तानीमा, प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडको विजयी सुरुआत !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गत वर्षको उपविजेता म्यानचेस्टर युनाइटेडले विजयी सुरुआत गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको नयाँ सिजनको खेलमा युनाइटेडले पहिलो खेलमै स्पष्ट जित निकाल्दै खातामा ३ अंक जोड्न सफल भयो ।
आफ्नो घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा युनाइटेडले ३ वर्षअघिको लिग च्याम्पियन लेस्टर सिटीलाई २–१ ले स्तब्ध बनायो । यस सिजनबाट क्लब छाड्ने चर्चामा रहेका पाउल पोग्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको युनाइटेडले खेलको तेस्रो मिनेटमै पेनाल्टीबाट गोल गर्दै सुरुआती अग्रता लिएको थियो ।
तेस्रो मिनेटमा गरेको उक्त गोल नै नयाँ सिजनको पहिलो गोल थियो । पेनाल्टी कप्तान पोग्बाले हानेका थिए । सोही गोलको मदतमा युनाइटेडले पहिलो हाफमा १–० को अग्रता लिएको थियो ।
दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किन संघर्षरत सिटीविरुद्ध युनाइटेडले खेलको ८३औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेपछि उसले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । २–० को स्पष्ट जितनजिक पुगेको युनाइटेडविरुद्ध खेलको निर्धारित ९० मिनेटपछि थप गरिएको समयको दोस्रो मिनेटमा सिटीले गोल गरे पनि अंक बचाउन भने सकेन । सिटीका लागि जिम्मी भर्डीले गोल गरेका थिए ।
यो जितपछि युनाइटेड पहिलो खेलबाटै स्पष्ट ३ अंकसहित अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ । सिटी अंकविहीन छ । र, ऊ तालिकको सबैभन्दा पुछारमा छ ।
लिगमा आज (शनिबार) कूल ६ खेल हुँदैछन् । टोटनह्याम र न्युक्यास्टल तथा हन्डसर्फफिल्ड र चेल्सीको खेल पनि आजै राति हुँदछ ।